Semalt ကဆာဗာတုန့်ပြန်မှု၏ SEO အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့ရှင်းပြသနည်း။
ဆာဗာများသည်အင်တာနက်ကိုဖွဲ့စည်းသောကွန်ပျူတာများဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု၏တုံ့ပြန်မှုကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခု၏တင်နှုန်းသည်၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အဆင့်ကိုထိခိုက်သည်။
Semalt ၏ ဖောက်သည်များအောင်မြင်မှုမန်နေဂျာဖြစ်သူ Frank Abagnale ကသင်၏ SEO အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော status codes များအကြောင်းကိုရှင်းပြသည်။
အသုံးပြုသူက link တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင် server က header status ကိုပြန်ပို့တယ်။ browser ကရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြဖို့ URL လိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုပြန်ပို့တယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားခြင်းမရှိလျှင်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ Server header status ကုဒ်သည်အသုံးပြုသူထံသို့ပေးပို့မည့်စာကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အွန်လိုင်းစျေးဆိုင်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်တွင် www.mywebsite.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင် server ကဒီတုန့်ပြန်မှုကိုလက်ခံပြီး server header နဲ့ HTML code နဲ့ browser ကိုမြင်နိုင်မှာပါ။ header ကို "HTTP / 1.1 200 OK" ဖြင့်စတင်သည်။ Web တည်ဆောက်သူများသည်ဤ header status codes များကိုအနက်ဖွင့်ရန်ခိုင်လုံသောအသိပညာရှိသည်။ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုစီသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ SEO အလားအလာအပေါ်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
1. "200 OK ကို" ကုဒ်။ ၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အမှားအယွင်းအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုသူ၏ browser တွင်အောင်မြင်စွာတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ www.mywebsite.com တွင် ၀ ယ်နေသူတစ် ဦး သည်မေးမြန်းမှုမှန်ကန်ပါကဤတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးအဆင်ပြေကြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူများသည်သင်၏စာမျက်နှာကိုတွေ့လိမ့်မည်ဟုမြင်သောအခါကုဒ်သည်သင်၏ SEO အတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၂။ ကုဒ်နံပါတ် ၃၀၁ လှုပ်ရှားမှုမရှိလှုပ်ရှားမှု။ သင်ရှာနေသောအကြောင်းအရာပြောင်းရွှေ့သောအခါဤအခြေအနေကုဒ်ကိုပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာပါ ၀ င်သည့် URL သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်သကဲ့သို့ "200 OK" ၏ယူဆချက်ကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ SEO ကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ရန်ဤနည်းကိုသုံးပါ။
၁။ ဆာဗာ header status ကုဒ် "302 Found" ၎င်းသည် SEO အားထုတ်မှုအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူအားအကြောင်းအရာအသစ်သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည်။ အသွားအလာနှင့်မသက်ဆိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအတွက် ၀ ယ်သူသည် ၀ ယ်ယူတော့မည်ဆိုပါစို့။ သို့သော်ဤအမှားသည်ပစ်မှတ်စာမျက်နှာကိုခွင့်မပြုပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စာမျက်နှာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုမတိုးတက်ပါ။
2. 400 အဆင့်ကို server ကို header ကို status ကိုကုဒ်။ အကယ်၍ ဆာဗာတောင်းဆိုမှုသည်အကြောင်းအရာများကိုအနက်ဖွင့်နေသကဲ့သို့မဟုတ်တော့ပါက ၄၀၄ မတွေ့ပါသို့မဟုတ် 410 Gone ကုဒ်ကိုပြလိမ့်မည်။ ဤအဖြေသည်သင်၏ SEO အတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုးသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသုံးပြုသူများသည်ဤ link ကိုနှိပ်သောအခါအကျိုးကျေးဇူးများမရနိုင်ကြောင်းသိသည်။
3. 404 သို့မဟုတ် 410 အမှားအယွင်းများ ၎င်းသည် link အခွင့်အာဏာကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးသင်၏ပျောက်သော web content အား deindexxification အခွင့်အလမ်းတိုးစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျိုးပဲ့နေသော link တစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောအကြောင်းအရာများပျောက်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။ SEO သည် SEO အပေါ်အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
မည်သည့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မဆိုအွန်လိုင်းပေါ်မှတည်ရှိမှုနှင့်အဆင့်မြင့်သောနေရာများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသည်အရေးကြီးသည်။ သို့သော် SEO တစ်ခုတွင်အချို့သောရှုထောင့်များမရှိသည့်အခါတွင်အောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ဥပမာဆာဗာ၏တုန့်ပြန်မှုသည် SEO SEO အားထုတ်မှုများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကွဲပြားခြားနားသော status codes အမျိုးအစားများကိုဆိုလိုသည်မှာ server ပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်စေသည်။ ကွဲပြားသောတုံ့ပြန်မှုများသည်သင်၏ SEO မဟာဗျူဟာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အထက်ပါအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ hosting package တွင်အမှားအယွင်းအချို့ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအပေါ်သင်၏ site ၏အခွင့်အာဏာကိုပြန်လည်ရရှိစေရုံသာမကသင်၏ဖောက်သည်များစီးဆင်းမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။